यस्ता छन् स्क्रब टाइफसका लक्षणहरू
विराटनगर, २३ असोज । हालै फैलिरहेको डेंगुको महामारीबीच स्क्रब टाइफसका संक्रमित बिरामी पनि देखिने क्रम सुरु भइसकेको छ । डेंगुभन्दा कैयौं गुणा बढी मृत्युदर भएका कारणले स्क्रब टाइफसलाई डेंगुभन्दा घातक रोगका रुपमा लिइने गरिन्छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा स्क्रब टाइफसको संक्रमण ह्वातै बढ्ने क्रममा रहेको छ । सरुवा रोग विशेशज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार हालै प्रकाशित भएको तथ्यांकले पनि अहिले आएर डेंगुको भन्दा स्क्रब टाइफस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको देखाएको छ । अहिले नै केही व्यक्तिहरुको मृत्यु स्क्रब टाइफसका कारणले भएको खवर सार्वजनिक भइरहेको छ ।
यो मौसम स्क्रब टाइफस देखिने समय हो । सुरुमा नै रोगको लक्षणको पहिचान गर्न सके उपचार गरेर पूर्ण रुपमा निको पार्न सकिन्छ । स्क्रब टाइफस सहरमा देखिएको खण्डमा रोगको पहिचान सरल र डाक्टर र अस्पतालहरु नजिकै हुने भएकाले उपचार छिटो हुने हुँदा रोगबाट जटिलता हुने सम्भावना कम हुन्छ । तर, ग्रामीण इलाकामा अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा राम्रो नहुँदा, रोग पहिचान गर्ने किट सहजै उपलब्ध नहुँदा र टाइफाइडसँग यसको लक्षण मिल्न जाँदा टाइफाइद भन्दै अरू नै औषधिको प्रयोग गर्दा रोगको पहिचानमा ढिलो हुन गई बिरामीको मृत्युसमेत हुने गरेको हुन्छ ।
स्क्रब टाइफस एक प्रकारको जीवाणु ‘रिकेटसिया सुसुगामुसी’ले संक्रमित सूक्ष्म कीरा अर्थात् माइटको टोकाइका कारण लाग्ने गर्छ । १०४ डिग्री फरेनहाइट वा सोभन्दा उच्च ज्वरो आउने, अत्यधिक टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, शरीर कम्जोर हुने, शरीरमा कालो घाउको दाग देखिने वा खटिरा आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, आँखा रातो भएर आँसु आए जस्तो हुने, कृत्रिम आवाज सुनिने तथा कान बन्द भए जस्तो महशूस भएमा स्क्रब टाइफस लागेको लक्षणहरु हुन सक्छ ।
यस्ता लक्षणहरु एक साथ देखा परेमा स्क्रब टाइफस हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ । तर, स्क्रब टाइफसको निश्चित निदान भने प्रयोगशाला जाँचबाट मात्र गर्न सकिन्छ । लक्षणहरु देख्न साथ नजिकैको अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमा जना डा. पुनले सुझाव दिएका छन् । रोगको शुरुवाती चरणमा सामान्य एन्टिबायोटिक औषधि लिए अठ्चालीस घन्टामा ज्वरो तीव्र गतिमा कम हुँदै जाने र सही उपचार पाउँदा बिरामी छिट्टै निको हुने गर्छ ।